I-Kenya ne-Google ukubeka wonke amagugu amasiko e-Afrika online - AFRIKHEPRI
Ukuzila Impilo Nezempilo - Ehret (Audio)
ulwesihlanu, july 3, 2020
I-Kenya ne-Google izoletha zonke izimpahla zamasiko ase-Afrika ku-Intanethi ngokusebenzisa i-Google Cultural Institute. Naphezu kwezinhlobonhlobo zezinsizakalo ze-intanethi zokufinyelela isiko, kuyaqaphela ukuthi isiko lase-Afrika lihlehlisiwe kakhulu. Lesi sinyathelo sigodla igebe. Le phrojekthi yamenyezelwa njengesinyathelo esibaluleke kunazo zonke esake saqala Africa : i-digitization yamagugu amasiko wezwekazi lonke. Ukuhlukahluka kanye nomnotho wezomnotho wase-Afrika ku-Intanethi. Umsebenzisi angabonisana nabo kusuka kwikhompyutha kanye nedivayisi yeselula (ifoni nethebulethi).
Le phrojekthi ihlanganyelwe ngokuhlanganyela yi- -Google I-Cultural Institute ne- Kenya ngeNational Center for Archives and Documentation. Ngaphezu kwezinto ze-1000 sezivele zikhona esiteshini. Kunamaqhawe aseKenya, ama-art art sculptures eZimbabwe, Makonde eTanzania naseKaramojong e-Uganda. Izinto zobuciko eziqoshwe enkuni, ngamatshe noma ensimbi. Indawo yokuzikhethela igcinwe ubuciko be-calabash yaseNtshonalanga Afrika.
Imibukiso ibanjwe ku-intanethi ngo-Okthoba 2015. Le phrojekthi isimemo sokufunda umlando weLagos, ukuhamba ezinyathelweni zikaNelson Mandela nokugcina imikhosi ehlukahlukene yase-Afrika. I-Google Cultural Institute ikhona lapho kuhambisane kwayo. Enye ingxenye yephrojekthi kwakuqaliswa uhlelo lokusebenza lweselula lwe-National Archives of Kenya. Lona lokuqala oluqaphela ngenxa yobuchwepheshe be-Google Cultural Institute. Abasebenzisi bathola izinto ezibonakalayo ezingavamile namadokhumenti, bangakhulumi ngezindaba zakudala.
Indlela yokuphila okuhle: izifundo ezivela ekutadisheni okude kunayo yonke injabulo
UMongameli waseTanzania ubeka isibonelo ngokuthatha udoti emgaqweni
I-Alchemist - UPaul Coelho (Audio)
YABELANA IMIHLOZO YAKHO
Chofoza isithonjana senhlalo ukuze ushicilele i-athikili.
Afrikhepri Foundation on Ososayensi bathola ukuthi ukuzila ukudla okudala ukuvuselelwa kweseli: "Ukuzila kusiza ukuvikela ezifweni zobuchopho. Ukuzila ukudla kwehlisa ingozi yakho yesifo senhliziyo kanye ..." NgoJuni 24, 22:48
Afrikhepri Foundation on USerena Williams wakha izikole e-Uganda, Zimbabwe, Kenya naseJamaica: "Ngiyabonga Serena ngokuzibophezela kwakho kwezemfundo e-Afrika!" NgoJuni 24, 22:40
Afrikhepri Foundation on I-Bhagavad Gita (PDF): "IBhagavad Gîtâ, umbhalo omkhulu wamaHindu kanye nefilosofi yamaNdiya, ungomunye wemibhalo eyasungulwa yeVedânta, ngo…" NgoJuni 24, 22:21